Ezigbo foto ndị a na-ebo ebubo nke OnePlus 7T Pro pụtara | Gam akporosis
N'oge na-adịghị anya, anyị nwere ike ịgba àmà maka mmemme mwepụta nke OnePlus 7T Pro. Ebe ọ bụ na duo nke ugbu a nke ụlọ ọrụ ahụ, nke bụ OnePlus 7 y 7 Pro, e mere ka ọ bụrụ onye isi, ndị na-enweghị ndidi na-ekwu okwu banyere ụdị mbụ anyị kpọtụrụ aha, na-akpata ọtụtụ ndapụta banyere njirimara ya, nke ga-abụ, ọ bụrụ na ọ bịarute, nke kachasị elu na nke kachasị mma ... .
Iji bulie echiche gị, foto ole na ole nke OnePlus 7T Pro apụtawo. Ndị a na-agwa anyị ọtụtụ ihe banyere atụmatụ nke ama, mana n'otu oge ahụ, ọ dịghị ihe ọhụụ, ọ bụkwa ihe ị nwere ike ịlele maka onwe gị n'okpuru.
Ngwaọrụ enwere ike ịhụ na onyonyo ndị edepụtara n'okpuru gosiri ya n'ime nchekwa. Na nke mbụ dị n'aka nri ọ na-ejikọta eriri USB na-akwụ ụgwọ, ebe nke abụọ abụghị. Ihe omuma a di ka ihe dika OnePlus 7 Pro, nke nwere ike buru ihe nwute. Atụmanya ndị dị adị na-ekwu maka ihe ọhụrụ, mana ọ ga-ekwe omume na naanị n'ime nkọwa dị n'ime ụlọ ọrụ na-elekwasị anya.
A na-atụ anya na OnePlus 7T Pro ga-ada ahịa ahụ ma emechaa, ọtụtụ ọnwa. Kpọmkwem, Nọvemba ga-abụ ụbọchị a mara ọkwa ya.
Ọ ka bụ ngwa ngwa ikwu banyere njirimara na nkọwa ya nwere ike, mana anyị nwere ike ịmalite site na ndị anyị maralarị gbasara OnePlus 7 Pro. O doro anya na ọnụ ọgụgụ a ga-aka mma.
Cheta na OnePlus 7 Pro na-abịa na ihu igwe 6.67 inch nke AMOLED nwere mkpebi QuadHD + nke pọdel 3.120 x 1.440 (516 dpi). Ọ na-enye ume ọhụrụ nke 90 Hz. Ikekwe ụdị ọzọ ga - ejigide otu agwa. N'aka nke ya, anyị na-ahụ ihe nhazi Qualcomm Snapdragon 855, ihe nchekwa 6/8/12 GB RAM, ebe nchekwa nke 128 ma ọ bụ 256 GB na ikike batrị 4,000 mAh, yana igwefoto azụ atọ nke 48 MP + 8 MP + 16 MP na ihe mmetụta n'ihu nke 16 MP.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ezigbo foto ndị a na-ebo ebubo nke OnePlus 7T Pro pụtara